Yintoni ekwiskrini sasekhaya sefowuni ye-Android?
Inxalenye ye Iifowuni ze-Android zeDummies Cheat Sheet
Esona sikrini siphambili kwifowuni ye-Android ibizwa ngokuba sisiKhaya sasekhaya. Kulapho zonke iintshukumo zenzeka khona: apho uqala khona ii -apps, sebenza iiwijethi, kwaye ujonge okwenzekayo ngesaziso kunye neempawu zesimo.
Ifowuni nganye inokudlala ngokwahlukileyo ulusu , okanye imbonakalo. Isitokhwe seFowuni yefowuni yesikrini sasekhaya siyaboniswa kulo mzobo. Ungazifumana izinto ezikulo mzobo kwisikrini sasekhaya sefowuni yakho, nangona zisenokungafani ngokufanayo.
lithetha ntoni inr ephezulu
lisinopril 10 mg kunye notywala
ukuseta njani i-desktop ekude
indlela yokuseta kwakhona i-intanethi
Isiraphu yealbuterol sulphate 2mg 5ml